स्वस्तानी माताले हामी सबैको रक्षा गरुन्: स्वस्थानी ब्रत कथा भाग – १९ सुन्नुहोस् ! «
स्वस्तानी माताले हामी सबैको रक्षा गरुन्: स्वस्थानी ब्रत कथा भाग – १९ सुन्नुहोस् !
Published : 28 January, 2020 11:28 am
नेपालमा धेरै श्रद्घा र विश्वासका साथ विशेषतः महिलाहरूले गर्ने ब्रत मध्येको एक श्री स्वस्थानी माताको ब्रत हो । यो ब्रतको भारत लगायत अन्य हिन्दु बहुल राष्ट्रमा त्यत्यी धैरै लोकप्रिय नभए पनि नेपालमा भने धेरै लोकप्रिय छ ।
तराईको छट पूजा र पहाडको श्री स्वस्थानी ब्रत नेपालको संस्कृतिको एक अंग हो । श्री स्वस्थानी माताको ब्रतकथामा उल्लेख गरिएकी साली नदी र श्लेशमान्तक वन हाम्रैदेश नैपालको काठमाण्डौमा छन् । यो ब्रतकथामा उल्लेखित विषय बस्तु र घटना पनि नैपालकै सेरोफेरोमा घटेको थियो भनी स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ । भिडियो हेर्नुहोस :